Mupanduki Aisatenda Muna Mwari Ava Kushumira | Bhuku Regore ra2015
AKABEREKWA MUNA 1944
AKABHABHATIDZWA MUNA 1964
NHOROONDO YOUPENYU Murume aisatenda kuti kuna Mwari ava nemakore 50 achishumira Jehovha akatendeka.
PANDAIVA jaya ndakaodzwa mwoyo neruvengo rwainge rwakazara muzvitendero. Ndaisanzwisisawo kuti nei Mwari ainge asina kugumisa urombo uye udzvinyiriri, uye kuti nei vakawanda vanoita zvechitendero vasingaiti zvinotaurwa neBhaibheri. Saka ndakarega kutenda kuti kuna Mwari ndichifunga kuti chimurenga chete ndicho chaigona kugadzirisa zvinhu pasi rese.
Muna 1962 ndakatanga kuverenga magazini inonzi Awake! Ndakazobvuma kudzidziswa Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha muna 1963. Ndakabatsirwa chaizvo nezvandaidzidza. Ndakasvika pakunzwisisa kuti haasi Mwari aituma vezvitendero kuti vauraye vanhu asi kuti ane chinangwa chekuti vanhu vararame upenyu hwakanaka. Pashure pemwedzi miviri ndatanga kudzidza, ndakatanga kuudza vamwe kuti Umambo hwaMwari huchabvisa nyika ino yakaipa. Ndakabhabhatidzwa muna 1964 ndikazogadzwa sapiyona chaiye muna 1966. Chokwadi chakandiponesa, nekuti pavapanduki vakawanda vandaishamwaridzana navo vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaiswa mumajeri, uye vamwe vaitofanira kutiza munyika. Ndinoonga kuti Jehovha akandichinja kubva pakuva munhu asingatendi kuti kuna Mwari, uye asina tariro, ndikava mushumiri waMwari anovimbisa nyika itsva yakarurama.
Hama Crispín vachiitisa kunamata kwemangwanani paBheteri